Welcome to Rotary E-Club Of Myanmar | Rotary E-Club Of Myanmar
Welcome to Rotary E-Club Of Myanmar
Throughout Rotary's history, several basic principles have been developed to guide Rotarians in achieving the ideal of service and high ethical standards.
The club is the cornerstone of Rotary, where the most meaningful work is carried out. All effective Rotary clubs are responsible for four key elements: sustaining or increasing their membership base, participating in service projects that benefit their own community and those in other countries, supporting The Rotary Foundation of RI financially and through program participation, and developing leaders capable of serving in Rotary beyond the club level. What Rotarians get out of Rotary depends largely on what they put into it. Many membership requirements are designed to help members become and remain active participants in their clubs, and enjoy their Rotary experience.
E Rotary Club of Myanmar ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခြေခံကျသည့် လူသားခြင်း စာနာသောစိတ် ဖြင့်၊ လိုအပ်ချက်မပြည့်စုံသူများ၊ နာမကျန်းဖြစ်၍ ဆေးဝါးကုသရန်မပြည့်စုံ သူများ၊ အစားအသောက် အဝတ် အထည် မပြည့်စုံသူများ၊ ဒေသတွင်းရှိ ကလေးငယ်များ ပညာ သင်ကြားနိုင်ရန်နှင့်၊ သန့် ရှင်းသော သောက်ရေသန့် ရရှိရေး၊ မီးအလင်း ရရှိရေးစသည့် စိတ်ကူးများကို အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အားဖြည့်ပြုစုပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
- ဤအဖွဲ့ သည် မည်သည့်ဘာသာရေး၊နိုင်ငံရေး တို့ နှင့်မျှ မသက် ဆိုင်သော လူမှုရေး အကူအညီပေးသည့်အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
- လူအချင်းချင်း၊ အသင်းဝင်အချင်းချင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ မြင့်မားပြီး လူ့ ဘဝ၌ လူနေမှု အဖွဲ့ အစည်းကျယ်ပြန့် စေရန်။
- ဤအဖွဲ့ သည် လူသားအတွက် အကျိုးပြုနိုင်မည့်၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နားလည်မှုရှိသည့် လူသားနှင့်ဆိုင်သော ဘဝတွင် ရှင်သန်နိုင်ရန် ရည် ရွယ်၍ အားနည်းနေသူများကို လူသားချင်းစာနာသော စိတ်စေတနာ ရှိကြသည့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများမဟုတ်သော မြန်မာနိုင်ငံသား များဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Mr. Min Than Htay
Mr. U Htaung Ngite Lyann
Daw Than Than Soe
Daw Ohn Ohn Wann
အမည် - E Rotary Club of Myanmar အသင်းဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်မှီနည်းစနစ် ဖြင့် အသင်းဝင်များအချင်းချင်း ရင်းနှီးစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
တည်နေရာ - E Rotary Club of Myanmar အသင်းသည် တိုက်(၁၀၁) ၊ အခန်း(၂)၊ ဓမ္မစေတီလမ်း (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင်တည် ရှိပါသည်။
အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက် - လူနေမှုဘဝမြင့်မားသောလူ့ ဘောင်အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်လာစေပြီး လူ သား အချင်းချင်းစာနာသော စိတ်စေတနာဖြင့် လူသားအချင်းချင်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်အေးချမ်းသော လူနေမှုဘဝကိုဖေါ်ဆောင်နိုင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။